နှာခေါင်းသွေးလျှံတတ်သူတွေအတွက် အရေးပေါ် ကုသနည်းများ - YOYARLAY Digital Media and News
နှာခေါင်းသွေးလျှံတတ်သူတွေအတွက် အရေးပေါ် ကုသနည်းများ
Published: November 27, 20182:03 am Updated: April 16, 20193:23 pm
နှာခေါင်းသွေးဟာ နှာရိုးကျိုးတာ အပါအဝင် နှာခေါင်း ယားယံတာနဲ့ အအေးမိ၊ နှာစေးစတဲ့ ပြဿနာ အမျိုးမျိုးကြောင့် လျှံတတ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် အကြောင်းပြချက် ရေရေရာရာ မရှိဘဲ ထစ်ခနဲရှိ နှာခေါင်းသွေးလျှံတတ်သူတွေအတွက် အရေးပေါ် ကုသနည်းတွေကို ဒီ ဆောင်းပါးလေးကနေ တစ်ဆင့် ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
နှာခေါင်းသွေးလျှံလာပြီဆိုရင် သွေးတွေ လည်ချောင်းထဲကို ပြန်စီးတာကို တားဆီးနိုင်ဖို့အတွက် ကျောမှီထိုင်ခုံမှာ ထိုင်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်တစောင်း အနေအထားနေပြီး ခေါင်းကို ငုံထားပေးပါ။။ နှာခေါင်းတစ်လျှောက် ပိတ်နေတဲ့ သွေးတွေကို အပြင်ထွက်စေဖို့ ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန် ရှူထုတ်ပေးပါ။ ဒီဖိအားကို ပုံသေဖြစ်စေဖို့ ရိုးဆက် အရွတ်နားက နှာခေါင်းရဲ့ အနူးညံ့ဆုံးအပိုင်းကို လက်ညှိုးနဲ့ လက်မနှစ်ခုကြား ဆယ်မိနစ်လောက် ညှပ်ထားလိုက်ပါ။ ဒီစာဖတ်နေစဉ်အတွင်း စမ်းလုပ်ကြည့်ပါ။
ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ ဂွမ်း (သို့) လက်ကိုင်ပဝါစလေးကို လိပ်ပြီး သွားဖုံးနဲ့ အပေါ်နှုတ်ခမ်းကြား ဆယ်မိနစ်လောက်ထည့်ထားပေးပါ။ အဲဒါကို ဆယ်မိနစ်လောက် မထားနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ အကြွေစေ့လေး တစ်စေ့ကို နှုတ်ခမ်းအပေါ်ဘက်နဲ့ နှာခေါင်းကြားတင်ပြီး လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ ဆယ်မိနစ်လောက် ဖိပေးလိုက်ပါ။
နှာခေါင်းသွေးထွက်တဲ့ဘက်ခြမ်းကို ရေခဲတုံး (သို့) ပဝါစ အေးအေးလေးနဲ့ သင်ခံနိုင်ရည် ရှိသလောက် ဖိလိုက်၊ ဖယ်လိုက် တင်ထားပေးပါ။ အအေးဓာတ်က သွေးကြောတွေကို ကျုံ့စေပြီး နှာခေါင်းသွေးလျှံတာကို တားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်။
– နောက်ထပ် နှာခေါင်းချွေးပေါက်တွေကို ကျဉ်းစေတဲ့ အဲကွန်းအောက်မှာလည်း အကြာကြီးမနေပါနဲ့။
– နှာခေါင်းရဲ့အချွဲဂလင်းတွေနဲ့ သွေးကြောတွေကိုရှည်လျားစေတဲ့ ဗီတာမင်စီကိုလည်း များများသုံးစွဲပေးပါ။
Ref: Pinterest “TRICKS TO MAKE NOSE BLEEDING STOP!”
Post Views: 19,239
Previous Previous post: Google Play Store မှာ Malware App တွေ ရှာတွေ့
Next Next post: ပလတ်စတစ် ၁၃ ပေါင်လောက် စားမိထားတဲ့ ဝေလငါးသေတစ်ကောင် အင်ဒိုနီးရှားမှာ ကမ်းတင်လာခဲ့
မျက်စိအောင့်တာမျိုး မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ
မျက်စိအောင့်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ။ မျက်လုံးက ဖွင့်ထားနေတဲ့ အချိန်မှာ နာလာတာ၊ ပူစပ်လာတာ၊ မျက်ရည်ပူတွေ ကျလာတာမျိုး၊ အထဲကနေ အောင့်ပြီး ယားယံလာတာမျိုး စတဲ့ ခံစားချက်မျိုး ဖြစ်ဖူးကြမှာပါ။ အထူးသဖြင့် အိပ်ခါနီး အချိန်တွေ၊ ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပျူတာကို…
Published: June 19, 20209:20 am
မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ လို့ အရပ်ထဲမှာ ခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ ဆိုဒီယမ်ဘိုင်ကာဗွန်နိတ်ကို မုန့်ဖုတ်ရာမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သုံးကြတာကို သိကြပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါကို ချက်ပြုတ်ရာတွင်မကပဲ ကျန်းမာရေးနှင့် အိမ်တွင်းနည်းလမ်းများတွင်လည်း သုံးနိုင်ပါသေးတယ်။ အခုဆောင်းပါးမှာတော့ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါကြောင့် ရရှိနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးကောင်းကျိူးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁)…
တလောက… မိုးမကျခင်လောက်ကပေါ့. …ဆေးခန်းကို လူနာတွေလာတဲ့အခါ သန်ချဖို့ပြောရင် “သန်က အခုချရမှာလား မိုးတွင်းရောက်မှ ချရမှာလား? “ဆိုတာ အတော်များများ မေးကြပါတယ်။ ” အခုချရမှာပေါ့….မိုးတွင်းရောက်မှရယ်မဟုတ်ဘူး…သန်က ၆လတစ်ကြိမ် ပုံမှန်ချရမှာ ” လို့ ပြန်ပြန်ရှင်းပြရတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ…
Published: July 28, 20184:44 am Updated: April 18, 20194:06 pm